'Ajjeechaa Waldiyaan namoonni shakkaman 13 to'ataman' - BBC News Afaan Oromoo
11 Sadaasa 2019
Image copyright Feesbuukii Yiinivarsitii Waldiyaa
Hoogganaan Waajjira Nageenyaa Godina Walloo Kaabaa Koloneel Haayilamaaram Ambaayee rakkoo Yuuniversitii Waldiyaa keessatti lubbuu barattootaa galaafateen walqabatee qaamoleen harka keessa qabu jedhamuun shakkaman seeraan to'atamuu ibsan.
Hanga ammaatti barattoonni shakkaman 13 to'annoo seeraa jala oolfamaniiru jedhan Koloneel Haayilamaaram.
Barattoonni biroon gocha kana keessatti hirmaataniiru jedhamanii shakkaman kan biroonis seeraan barbaadamaa jiru jedhan.
Waldiyaan har'as rakkoo keessa jirti jedhame
Guyyaa har'aa Yuunivarsiticha keessatti tasgabbiin uumameera kan jedhan Koloneel Haayilamaaram barattoonni nageenyasaaniif yaadda'an qe'ee isaaniitti deebi'uu barbaadu jedhan.
Barattoonni gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu haa barbaadaniyyuu malee haalicha tasgabbeessuuf mariin jaarsolii biyyaa, abbootii amantii, aanga'oota mootummaa godinichaa fi jiraattota naannoo hirmaachise gaggeeffamaa jira jedhan.
Mariin kun akkaataa barattoonni yaaddoo nageenyaaf jecha barnootasaanii dhiisanii gara qe'eesaaniitti deebi'uuf jedhan tasgabbaa'anii barnootasaanii itti fufuu dand'an irratti kan xiyyeeffateedhas jedhan.
Barataan naannoo Oromiyaa irraa gara Yuunivarsitii Waldiyaa deeme tokko BBCtti akka himetti jaarsolii biyyaa fi abbootii amantii irraa waan dansaa dhageenyullee kanneen haleellaa qaqqabsiisan wayita seeratti dhiyaatan garuu hin argine jedha.
"Warri nama keenya ajjeese, kan miidhe ija keenyaan kan agarre seeratti nuf dhiyaatee hin jiru" kan nun jedhe barataan yuniarsiitichaa maqaan isaa akka hin eeramne barbaade Poolisiin addaa naannichaa wayita qe'ee keessa turetti barattootni miidhaa geessisan akka to'atamanif eeruu kennanillee poolisiin to'annoo jala akka hin oolchine hime.
Yunivarsitoota walitti bu'iinsaan raafamaa jiran
Ammas taanaan soda keessa jiraachuu kan dubbatu barataan kun fedhiin gara mana isaatti deebi'uuf qabu ammallee akka hin jijjiiramne himeera.
Gareen halkan haleellaa qaqqabsiisan meeshaa qara qabu qabatanii turan kan jedhu barataan kun 'Namoota ajandaa siyaasaa qaban' waliin hidhata qabaachuu shakkina jedha.
Barattun waggaa sadaffaa yunivarsiitichaa sodaan nageenyaa ammallee akka jiru himti.
"Hawaasni naannoo kanaa hawaasa gaarii, hawaasa yaaduu danda'u fi hawaasa nama walin jiraachuu danda'u ta'uu isaa ni amanna ni jaalannas" kan jettu barattuun kun dargaggootni hawaasa keessa dhokatanii ijoollee yunivarsiitii keessaa walin qindaa'uun barattoota Oromoo miidhuf socho'an akka jiranis himteetti.
Marii gaggeeffamerratti barattoonni akka turanii barnootasaanii hordofan waamichi dhiyaatullee ''Ammallee sodaa nageenyaa waan qabnuuf gara maatii keenyaatti deebi'uuf murteessineerra.'' Jedhu barattoonni BBCn dubbise.
Akka Koloneel Haayilamaaram jedhanitti raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa mooraa yuunivarsitichaa seenuun nageenya eegsisaa jiru.
Kolonel Haayilamaaram Ambaayee komii qaamni alaa seene jira jedhu irratti "qaamni alaa seenee miidhaa geessise hin jiru komiin kun oduu sobaati" jedhan.
Mootummaan dafee hin to'atu taanaan balaa guddaatu dhufa-Pirofeesar Mararaa Guddinaa.
Ta'ii Yunvarsiitii Waldiyaatti barattoota Oromoorra gaheen paartiin isaanii gadduu kan himan Pirofeesar Mararaa Guddinaa, mootummaan ta'iiwwan akkanaa hataattamaan fala itti kennuu baannaan sabni biyya kanaa waliin jiraachuufuu rakkoo keessa gala jedhan.
"Gochi akkanaa kuni yeroo tokko qofa miti, irra deddeebi'amaa jira barataa keenyas haa ta'u kan saba biraa, yoo miidhamu mootummaan saffisaan tarkaanfii gitu fudhachuu baannaan biyyi kuni gara hin taanetti deemaa jirti" jedhan.
Barattoonni Oromoo miidhaa gahe kana tasgabbiidhaan hordofanii barumsa isaanii osoo itti fufanii bayeessadha jedheen yaada. sababnisaas miidhaan kuni akkuma biyyaattti dhufe jedhan.
"Nutis karaa siyaasaa irratti hojjenna. Warri siyaasa akkanaa raawwatan galanii nagaan taa'urra jiru. Mootummaan Amaaraas waan kanaaf itti gaafatamaa ta'uu qaba. Warra kana raawwate seeratti dhiheessuunis dirqamadhas" jedhan.
Gochoonni akkanaa akka babal'ataniif mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo rakkoo mataasaanii qabaachuus himan.
Adeemsi akkanaa akka salphaatti ilaalamee akkuma baratame ni callisama taanaan garuu gochoonni akkanaa yeroo dhihootti too'annaa mootummaatiin ala akka ta'u beekamuu qabas jedhan.
Tarkaanfiin madaalawaa ta'e yoo hin fudhatamne saba Oromoo qofa osoo hin taane saboota biyya kanaa hunda aarsaa guddaa kanfalchiisa jedhan.
Tarkaanfiiwwan akkanaa maaliif saba Oromoo irratti fuullefatu jennee kan gaafanneefis " Rakkoon karaa lamadha. Sochiin jijjiiramni fide kuni sochii qeerrooo Oromooti. Adeemsa Kanaan yoo itti fufe Oromoon biyya nurraa fudhachuufi jedhanii warrayaaddoo keessa galantu jira. "
"Inni lammataa mootummaanis Oromoo keessaa waan baheef warri kaan gara Oromoo gorte yeroo jedhaniin karaa walakkaa dhaabbatee yoo rakkatan argina." Jedhan.
Irra caalaatti Oromoorratti dhimmootni hedduun kan fuullefatame garuu "Oromoon akka kana duraatti buluu didee jijjiirama haaraa mirgasaa ittiin eegsisuu danda'u fudhatee gara fuuladuraatti deemaa waan jiruuf. Innimmoo warra biyya kanarra akka barbaadan burraaqaa turanitti yaaddoo waan ta'eefi" jedhan.
Siyaasa dhaabbilee barnootaa olaanoo...
Siyaasni dhaabbilee barnoota Olaanoo keessatti kan jalqabame bara bulchiisa H/Sillaaseeti kan jedhan Proofesar Mararaan adeemsi sochii isaa garuu kallattii gadhiiseera jedhan.
"Yeroo warraaqsa barattootaa irraa eegalee hanga ammaatti sochiin barattoonni siyaasa biyya kanaarratti godhan gahee duddaa bahe. Inni amma siyaasa jedhamee barataa fi barataa wallolchiisan, wal ajjeechisan paartileenis herreega akkanaarraa bu'aa argachuu barbaaduun kuni adeemsa karaarraa goredha" jedhan.
Adeemsi garee lama walitti buusanii biyya bulchuu kuni yeroo Obbo Mallas Zeenaawwii fi Hayilemaariyaam Dassaaleny itti dhimma bahamaa turuu fi adeemsa gaaffii barattootaas kan karaarraa dabse toftaa mootummaan itti dhimma bahuuf kalaqeen eegalamuu himu.
Paartileen biyya kanaas sagantaa isaanii beeksifatanii nagaan dorgomuudha malee barataa fi barataa wallolchiisuudhaan waa arganna jedhanii yoo deeman rakkoo hammaataa fida malee daandii sirrii ta'uu hin danda'u jechuun BBC tti himan.